Football Khabar » च्याम्पियन्स लिग : अन्तिम १६ मा बार्सिलोनाको प्रतिस्पर्धी को ?
च्याम्पियन्स लिग : अन्तिम १६ मा बार्सिलोनाको प्रतिस्पर्धी को ?
जारी सिजन युरोपियन च्याम्पियन्स लिगको नकआउट चरण अन्तिम १६ मा स्पेनिस बार्सिलोनालाई अन्य ठूला टोलीको तुलनामा केही सहज प्रतिस्पर्धी पर्ने देखिएको छ । अझै पनि अन्तिम १६ मा जाने समूह ‘सी’ र ‘डी’बाट गरी दुई उपविजेता टोलीको टुंगो लाग्न बाँकी छ । तर, बार्सिलोनाले अन्तिम १६ मा पाउने प्रतिस्र्धी टिमको अनुमान लगाउन सकिन्छ । जसअनुसार बार्सिलोनालाई नकआउट चरणमा इंग्लिस वा इटालियन क्लब प्रतिस्पर्धी पर्ने सम्भावना प्रबल छ ।
बार्सिलोना समूह ‘एफ’को विजेता भएकाले उसले आफ्नो समूह बाहेक अन्य कुनै पनि समूहबाट उपविजेता टोली प्रतिस्पर्धी पाउनेछ । यसरी हेर्दा बार्सिालेनालई इंग्लिस क्लब टोटनह्याम, इंग्लिस क्लब चेल्सी, इटालियन क्लब नापोलीमध्ये कुनै एक टोली पाउनेछ । बार्सिलोनाका लागि नापोली वा टोटनह्याम परे निकै कठिन पर्न सक्छ ।
अन्तिम १६ को ‘ड्र’को नियमअनुसार कुनै पनि टिमले एकै देशको क्लबसँग खेल्नु पर्दैन । त्यस्तै, समूह चरणको आफ्नै समूहको टोलीसँग पनि खेल्नु पर्दैन । ‘ड्र’को अर्को प्रमुख सर्त भनेको समूहको विजेताले अन्तिम १६ मा अर्को समूहको उपविजेता र उपविजेताले अर्को समूहको विजेता टोलीसँग खेल्नुपर्छ ।
प्रकाशित मिति २५ मंसिर २०७६, बुधबार १९:४५